२ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : जीवनमा परिवर्तन आउनेछ ! – NepalajaMedia
२ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : जीवनमा परिवर्तन आउनेछ !
January 26, 2021 494
जतिबेला तपाईंको मृ:त्यु हुन्छ त्यही समयदेखि तपाईंको पहिचान एक ला:स बन्न सुरु गर्छ । अरे … ला’स लिएर आउनुहोस्। … ला’स लाई उठाउनुहोस्। .. ला’स लाई सुताउनुहोस। . यस्तै शब्द ले तपाइँलाई बोलाउछन ति मान्छेहरूले तपाइँलाई तपाईंको नामले बोलाउने छैनन् , जसको लागि तपाईंले आफ्नो सम्पुर्ण जिबन बिताउनुभयो । फ़ेरि पनि नाच्नुहोस । ति खुशिहरु महसुस गर्नुहोस् । फोटोहरु खिच्नको लागि पागल जसरी पोज दिनुहोस् । एकदम सानो बच्चा जस्तै बन्नुहोस । *****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
Prevअनुहारको दाग-धब्बाले लज्जित हुनु परेको छ ? यसरी हटाउनुहोस्
Nextछोटा कपडा लगाउनेलाई कम्बोडियाले ल्यायो नयाँ कानुन – पुरुषलाई उत्तेजित गराउन नपाइने